အော်ဂဲနစ် gluten အခမဲ့အနက်ရောင် bean ကို fettuccine - တရုတ်အော်ဂဲနစ် gluten အခမဲ့အနက်ရောင် bean ကို fettuccine ပေးသွင်း,စက်ရုံ -Qianna
အော်ဂဲနစ်အနက်ရောင် bean ကို fettuccine အနက်ရောင် bean ကိုမုန့်ညက်ဖန်ဆင်းထားသည် , ရေ . ဒါကြောင့်အများအပြားကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများရှိပါတယ်.
ဖိုက်ဘာနဲ့မှန်မှန်အစာခြေ၏မြင့်အကြောင်းအရာကိုလည်းသွေးသကြားဓာတ်အဆင့်ဆင့်အတွက် spikes နှင့်ပျက်ကျတားဆီး. Unsteady သကြားအဆင့်ဆင့်အဘို့အဆိုးဝါးနိုင်ပါတယ် ဆီးချိုရောဂါ.
အဆိုပါအနက်ရောင် bean ကိုမဆိုအခြား bean ကိုထက်ပိုမိုဓါတ်တိုးလှုပ်ရှားမှုပါရှိသည်. လေ့လာမှုတစ်ခု, ထဲမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်စားနပ်ရိက္ခာဓာတုဗေဒဂျာနယ် တွင် 2003, မှောင်အမျိုးအနွယ်ကိုအင်္ကျီနှင့်အတူပဲမျိုးစုံပိုပြီး flavonoids ပါရှိသောကြောင့်ထင်ရှား. Flavonoids ရောဂါနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်အစွန်းရောက်စစ်တိုက်ခြင်းငှါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ antioxidants အဖြစ်အလုပ်လုပ်စေတဲ့အရောင်ထုတ်လုပ် phytonutrient ဆိုးဆေးများမှာ. Phytonutrients စက်ရုံဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်ကြသည်, အချို့ကပို တာဝန်ရှိသော အခြားသူများထက်စက်ရုံရဲ့အရောင်အဘို့, ထို ကူညီပေးသည် ခရမ်းလွန်ဓါတ်ရောင်ခြည်များနှင့်ရောဂါများမှရှင်သန်မှုများအတွက်စက်ရုံရဲ့စွမ်းရည်ကို.
6. Black ကပဲမျိုးစုံမှာလည်းသင့်ရဲ့ဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်မြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်.
Black ကပဲမျိုးစုံမှာလည်းဦးနှောက်ကိုလိုအပ်သောအမိုင်နိုအက်ဆစ်များကို, ဗီတာမင်, နှင့်သတ္တုဓာတ်. တချို့ကဗီတာမင်, ဗီတာမင် B9 နဲ့ဖောလိတ်အပါအဝင်, အာရုံကြောစနစ်လိုအပ်သည်တိကျတဲ့အမိုင်နိုအက်ဆစ်များစည်းမျဉ်းများတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ.
ပါဝင်ပစ္စည်းများ: အော်ဂဲနစ်အနက်ရောင် bean ကိုအမှုန့်, ရေ